Panasonic GZ2000, ezi ihe nkiri ụlọ | Akụkọ akụrụngwa
Rafa Rodríguez Ballesteros | | Home, Noticias, TV
Mgbe anyị na-ekwu maka ihe ọhụrụ banyere ụlọ ọrụ dị ka Panasonic anyị maara nke ọma na ọ ga-emetụta ya nkà na ụzụ kachasị mma. N'oge a, anyị na-ekwu maka ihe ngosi metụtara ụwa ọdịyo, ndị GZ2000 TV, ezigbo usoro 1 iji kpachapụrụ anya na-eme ihe nkiri n'eleghị ụlọ.
TV na-eweta nkà na ụzụ kachasị mma n'oge a nke mere na ihe nkiri sinima n'ụlọ na-enye afọ ojuju dị ukwuu. Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị na-enwe ezigbo ihe nkiri na popcorn, Panasonic GZ2000 ga-eme ka ị ghara ịchọ ịlaghachi na fim. Okwu nke "Theaterlọ ihe nkiri nke ụlọ" na-ewere nkọwa zuru ezu.
Panasonic GZ2000, ahụmịhe kachasị ihe nkiri ụlọ
GZ2000 abata nha abụọ, 55 ″ na 65 ″, nha abuo di n'etiti nnukwu ma obu buru ibu. Anyị ahụwo otú telivishọn, na ihuenyo ha, dị ka ọ na-eme na smartphones ha anaghị akwụsị ito. Na TV nke afọ ole na ole gara aga dị mma, taa ọ bụghị. Ya mere, bido na nke kariri ezigbo mma, anyị na-ewepụta ihe ọzọ na ụfọdụ nwere ike bụrụ adịghị mma.
Mana GZ2000 abụghị naanị nnukwu ihuenyo. Ejiri ya ohuru HCX Pro processor. Mgbawa nwere ike imegharị nnukwu ụkpụrụ dị iche iche. Na ọdịdị oyiyi dị egwu ọ na-enye agaghị ahapụ onye ọ bụla. Obi abụọ adịghị ya nhọrọ zuru oke ịnụ ụtọ ihe nkiri "ezigbo", ma ọ bụ egwuregwu dị mma, nwere nghọta doro anya nke agba na mkpebi nke enweghị atụ.
Ma ọ bụrụ na ahụmịhe nlele ahụ dabara na ihe anyị nwere ike ịtụ anya na Panasonic, uda adighi na azu. na ndokwa nke ndị na-ekwu okwu gị chere ihu n’uko ụlọna Usoro ụda Dolby Atmos na Dolby Vison, agbakwunyere na telivishọn, na-eme ihe nkiri nkiri ka ọ ghara ịdịkwa ọzọ. Ọ bụrụ na ị na-eche igwe onyonyo nke nwere ike ime ka ị nwee mmetụta n'ụlọ ahụmịhe ihe nkiri sinima ahụ, Panasonic GZ2000 ezubere maka gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Panasonic na-ewebata GZ2000, TV kachasị n'ụwa